चार कम्पनीको आईपीओ आउँदै, हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कति ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
चार कम्पनीको आईपीओ आउँदै, हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । प्राथमिक शेयर ९आईपीओ०मा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ रु यदि हो भने पैसा जोहो गर्नतिर लाग्नुहोस् । केहि दिनभित्रै विभिन्न चार कम्पनीको आईपीओ बिक्री खुल्ला हुँदैछ । मानुषी लघुवित्त, बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर, साहस उर्जा लिमिटेड र न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले केहि दिनभित्र आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएका हुन् ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्युअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले लमजुङग जिल्लामा ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस आयोजनको निर्माण लागत अनुमानित रू। ६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ५५ हजार रहेको छ ।